M.M Goday iyo Xubno La Gudoonsiiyay Shahaado Sharaf - Cakaara News
M.M Goday iyo Xubno La Gudoonsiiyay Shahaado Sharaf
Goday(cakaaranews)Axad 11ka December 2016. Xafiiiska Nabad-galyada Maamulka Magaalada Godey oo kaashanaya Maamulka Magaalada Goday ayaa Shaahado Sharaf Gudoonsiiyay xubanaha sida adag uga shaqeeya Nabad galyada maamulka magaalada.
Hadaba, xafladan shahaado sharafta lagu gudoonsiinayay xubnaha mutaystay ee dadaalka badan ka sameeyay nabadgalayda magaalada ayaa waxaa shahaado sharafta si wada jir ah u gudoonsiiyay maayorka magaalada goday mudane Cabdisamad Aadan cismaan iyo hogaanka nabdagalayada maamulka magaalada goday mudane Cabdikaafi Maxamed cali. Waxayna sheegeen in xafladan maanta ay shahaado sharaf ku gudoonsiiyeen xubno kamid ah maamulka magaalada goday kadib markay muujiyeen dadaalo badan oo ku aadan nabadgalayada magaalada. Waxayna intaa kudareen masuuliyiintu in ujeedada gudoonsiinta shahaada sharaftani ay tahay dhiirigalin lagu dhiirigalinayo xubnaha mutaystay.
Sidookale xubnihii lagudoonsiiyay shahaado sharafta ayaa sheegay in ay aad ugu mahadcelinayaan shahaadooyinkan lagudoonsiiyay islamarkaana dhiirigalinbadan ay u tahay. Waxayna xuseen indadaalkooda kuaadaan nabadgalyada horumarka iyo maamulka suuban ay sii labojibaarayaan.
Iskusoowada duuboo xafladanshahaado sharafta lagu gudoonsiinayay shaqsiyaadka dadaalka balaadhan kasameeyay nabadgalayada ayaa si heersare ah kusooodhamaatay.